तेल तस्करीको नयाँ घटना : ट्यांकरमा भारतबाटै ल्याउने अनि फेरि उतै फर्काउने ! – Aarthik Dainik
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ तेल तस्करीको नयाँ घटना : ट्यांकरमा भारतबाटै ल्याउने अनि फेरि उतै फर्काउने !
तेल तस्करीको नयाँ घटना : ट्यांकरमा भारतबाटै ल्याउने अनि फेरि उतै फर्काउने !
आर्थिक दैनिक २०७७, चैत्र ५ १०:४६
भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएपछि नेपालबाट भारततर्फ इन्धनको तस्करी बढ्न थालेको छ । केही दिनअघि मात्रै प्रहरीले ढुवानी व्यवसायी एवं पुर्वाञ्चल ढुवानी व्यवसायी संघका सचिवले सञ्चालन गर्दै आएको ट्यांकरले नेपालबाट भारततर्फ लैजाँदै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
पछिल्लो समय भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने ट्यांकरले नेपालको लागि भनेर इन्धन ल्याउने र सोही इन्धन भारततिरै फर्काउने गरेका छन् । गत शनिबार मोरङ प्रहरीले दुई हजार छ सय ५० लिटर डिजेल हालेर भारततर्फ जानलागेको को १ ख ५९१२ नम्बरको ट्यांकरसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले प्रहरीलाई उजुरी गरेपछि मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेको ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी संघका सचिव चरणप्रित सिंग भएको पाइएको छ । उनले भारतमा नै बसेर सबै चाँजोपाँजो मिलाउने गरेको रहस्य पनि खुलेको छ । ट्यांकरबाटै हुन लागेको तस्करीमा पेट्रोलियम व्यवसायीको पनि संलग्नता हुनसक्ने आशंका बढेर गएपछि पछिल्लो समय मोरङ प्रहरीले पनि आफ्नो अनुसन्धान पेट्रोलियम व्यवसायीप्रति नै केन्द्रित बनाएको छ ।
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाको नेमुवास्थित रहेको नितेश इन्टरप्राइजेजबाट उक्त परिमाणको डिजेल भरेर ट्यांकर भारततर्फ फेरि नेपालको लागि पेट्रोल भर्न जाने तयारीमा रहेको बेला तेल तस्करीको रहस्य खुलेको हो । उक्त नितेश इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक महेश अग्रवाल हुन् । उनले पम्पबाट भ्याट बिल समेत जारी नगरी सोझै ट्यांकरबाट ठूलो परिमाणमा डिजेल बिक्री गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।
व्यवसायी अग्रवाल इन्धन वितरण प्रक्रियामा समेत पटक–पटक विवादमा आउने गरेका छन् । भारतको बरौनीबाट आएको सो ट्यांकरले आयल निगम विराटनगरबाट जाँचपास गराई गत शनिबार पेट्रोल पम्पमा खन्याएर पुनः तेल भर्नका लागि भारत जाने क्रममा पक्राउ परेको हो ।
गत आइतबार भारततर्फ जानुअघि पुनः आयल निगममा सिल गराउन गएको ट्यांकरमा निगम कर्मचारीले डिजेल फेला पारेपछि आवश्यक कारबाहीका लागि आयल निगमले प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । डिजेल भारततर्फ तस्करी गर्ने कार्यमा संलग्न को १ ख ५९१२ नम्बरको ट्यांकरका चालक र सहचालक भारत जोगबनी मिरगञ्ज निवासी २६ वर्षीय मोहमद सजाद र २१ वर्षीय इमरोज आलम अहिले पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् । तर ढुवानी व्यवसायी चरणप्रित सिंग अझै भारतमा नै छन् ।
करिब दुई वर्षअघि पनि उनै चरणप्रित सिंगका नातेदार एवं ढुवानी व्यवसायी गुरुदेव सिंगले सञ्चालन गर्दै आएको ट्यांकरबाट पनि इन्धन तस्करी भएको थियो । उसबेला उक्त घटनाबाट उन्मुक्ति पाएका गुरुदेव सिंगकै सिको गर्दै उनका आफन्तबाट अहिले इन्धन तस्करी हुनु कुनै अनौठो नभएको पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
करिब दुई महिनाअघि मात्रै गुरुदेव सिंगको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको ना ४ ख ५०९९ नम्बरको ट्यांकरले पनि आफ्नो ट्यांकरमा भएको तेल भर्ने नोजलको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको थियो । उक्त ट्यांकरलाई दुई महिनाको निलम्बनपछि ढुवानी अनुमति दिएको केही दिनभित्रै तेल तस्करीको नयाँ घटना सार्वजानिक भएको हो ।
गरुदेव सिंगलाई उन्मुक्ति दिएकै कारण उनकै नातेदारबाट इन्धन तस्करी भएकोले अब तस्करी गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने बताउन थालिएको छ । यसरी ट्यांकरमै हालेर पुनः भारततर्फ बिक्रीका लागि लैजाने व्यक्ति प्रदेश १ मा फेला परेका थिएनन् । यसअघि वीरगञ्जमा यसरी नै ट्यांकरबाट तस्करी गर्ने पक्राउ परेका थिए । भारतको बरौनीबाट पाइपलाइनमार्फत आउने डिजेल प्रदेश १ मा ल्याइने गरिए पनि पेट्रोल भने ट्यांकरबाटै भारतबाट ल्याइने गरिएको छ ।